कांग्रेस सभापति देउवा सफल कि असफल ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सभापति शेरबहादुर देउवाको दुई वर्षको मुल्याङ्कन
शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुगेको छ । सभापति निर्वाचित भएपछि वाम गठबन्धन टुटाएर कांग्रेसलाई सत्तामा पु¥याएको र आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेर राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको जस देउवाले पाएका छन् । तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएपछि पार्टी नेताहरू देउवामाथि खनिएका छन् । सभापति देउवाले निर्वाचित भएको केही महिनामै गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित र विभाग गठन अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । पार्टी संचालन शैलीलाई लिएर देउवाको आलोचना भइरहेको छ । यसै विषयमा कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको दुई वर्षे कार्यकाल सफल भयो कि असफल ? तपाईले कसरी मुल्याङकन गर्नुभएको छ ?
हामीले बस्तुनिष्ठ ढंगले मुल्याङकन गर्नुपर्छ । यो अवधि नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालको राजनीतिले ऐतिहासिक मोड लिएको छ । तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । समझदारी कायम गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि सहभागी गराएर परम्परागत द्दन्दको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण काम भए तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित भयो । आन्तरिक रुपमा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकै कारण पार्टीको अवस्था यस्तो भएको हो । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन सकेन् । विभागहरू गठन भएनन् । हामीले संगठित रुपमा विपक्षीहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकेनौँ । विपक्षीले लगाएका आरोपको खण्डन गर्न सकेनौँ । जनतालाई बुझाउन सकेनौँ ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित तथा विभाग गठन समयमै भएको भए अहिलेको अवस्था आउदैनथ्यो ?
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित तथा विभाग गठन समयमै गठन नहुँदा पार्टीलाई निकै घाटा भएको छ । एक हजार कार्यकर्तालाई विभागमा समेट्न सक्थ्यौँ । पार्टी केन्द्रमा नभएपछि जिल्ला, नगर र वडामा पनि भएनन् । भातृ संस्थाहरू (नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ) मा पनि अझै पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए १० देखि १५ हजार कार्यकर्तालाई समेट्न सकिन्थ्यो । त्यसमा हामी चुक्यौँ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि उठेको थियो तर सभापतिले संसदीय दलको नेतामा दुई तिहाई भन्दा बढी मत ल्याउनुभयो । यसको सन्देश के हुन सक्छ ?
संसदीय दलमा स्वतन्त्र हिसावले मतदान हुने स्थिति होइन । सभापतिले टिकट बाढ्नुभयो, आफूलाई मत हाल्नेलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभयो । आफैँले छानेका मतदाताले मत दिनु नौलो विषय भएन ।
युवा नेताहरू पनि गुटकै पछि लागेको देखियो । युवा सांसदले किन हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ?
हामीले पार्टी शुद्धिकरण अभियान चलाएका छौँ । अभियानमा सांसद र सांसद नभएकाहरू पनि छौँ । पार्टीभित्र अहिले पनि कमिला युगको जस्तै गुटहरु छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सोच्ने प्रवृति कम छ । संसदीय दलको निर्वाचनमा युवाले उपस्थिति जनाएको भए परिणाममा नभएपनि प्रभाव रहन्थ्यो । अभियान थप बलियो हुन्थ्यो । तर, त्यो स्थिति भएन ।
तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र) मा अल्पमतमा रहेको कांग्रेसमा किन यति धेरै गुटबन्दी ?
नेतृत्वमा दूरदृष्टि भएन भने यस्तो अवस्था देखिन्छ । वरिपरी आएका संकटको सामना कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने बेला परम्परागत गुटमै रमाउने अवस्थाले झन अप्ठ्यारो पार्छ । अहिले स्थानीय तहमा कांग्रेस बाहेको बहुमत छ । प्रदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । केन्द्रमा दुईतिहाई भन्दा बढीको समर्थन सरकारलाई छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र गुटबन्दीको सोच त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले अव कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ?
कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ । अव पनि हामी परम्परागत द्दन्दमा रुमालियौँ भने जनताले दुःख पाउँछन् । विकास र निर्माणका काम ठप्प हुन्छन् । सरकारले गर्ने राम्रो कामको कांग्रेसले खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन, विकास–निर्माणका काममा कांग्रेसको सहयोग हुन्छ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने, प्रतिपक्षलाई दुव्र्यवहार गर्ने, देश र जनताको लागि भन्दा सत्ताधारी पार्टीलाई मात्रै फाइदा हुने ढंगले काम भयो भने त्यसलाई कांग्रेसले रोक्नुपर्छ । कांग्रेसले पाँच वर्षसम्म ढुक्कले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।